FAQ - Smart Tech Technology
Manana Fanontaniana ve ianao?
Azafady mba vakio ny fanontaniana etsy ambany ary raha tsy hitanao ny valinteninao dia alefaso aminay azafady ny fanontanianao, hamaly anao izahay raha vantany vao azo atao.
Antsoy izahay anio +86 13360644989Antsoy izahay anio +86 13360644989
Fahalalana fototra momba ny sarontava
Ny fitsipiky ny fiasan'ny sarontava rivotra, na ny sarontava amin'ny sivana fohy, dia ny famelana ny rivotra misy zavatra manimba handalo ny sivana ataon'ny sarontava mba hivoatra ary avy eo nokaina.
Saron-tava famatsian-drivotra dia manondro loharanon-drivotra madio misaraka amin'ny zavatra manimba, izay alefa amin'ny tavan'ilay olona amin'ny alàlan'ny catheter mankany amin'ny saron-tava amin'ny fisefoana amin'ny alàlan'ny hetsiky ny herinaratra toy ny compresseur rivotra sy fitaovana tavoahangin-tsolika voatetika.
Ny sarontava sarimihetsika dia sokajy be mpampiasa amin'ny asa isan'andro. Ny fomba fisafidianana sy ny fepetra fampiasana ny saron-tava toy izany dia voalaza eto ambany. Ny firafitry ny sarontava sarontava dia tokony hozaraina roa, ny iray no tena vatan'ilay sarontava, izay azo takarina ho toy ny talantoky ny sarontava; ny iray kosa dia ny ampahany amin'ny sivana, ao anatin'izany ny landihazo sivana ho fisorohana vovoka sy sivana simika ho an'ny boaty antivirus sns. Noho izany, ho an'ny fisafidianana sy fampiasana sarontava sarimihetsika, ny vokatra sasany novokarin'i Guangjia dia manome anao izao fahafaha-manaraka manaraka izao, izany hoe azonao atao mampiasa karazana vatana sarontava mitovy. Rehefa ilaina ny fiarovana ny vovoka amin'ny tontolo iainana miasa amin'ny vovoka dia ampifanaraho amin'ny landy Filter izay mifanaraka amin'izany, ka manaova sarontava vovoka ianao; rehefa mila manao anti-virus amin'ny tontolo misy poizina ianao dia soloo ny boaty sivana sy ilay boatina sivana simika mifanaraka aminy ao amin'ilay fitaovana, mba ho lasa sarontava anti-virus na arakaraka ny filan'ny Asanao dia manome fitambarana bebe kokoa aminao.
Inona no tokony hojerena rehefa mampiasa sarontava？
Fampidirana fohifohy ny fitaovana sivana amin'ilay sarontava
Ny fitaovana sivana amin'ny sarontava miaro dia mizara roa amin'ny ankapobeny, dia ny vovoka sy ny anti-virus. Ny andraikitr'izy ireo dia ny mandray ny aerosol manimba, ao anatin'izany ny vovoka, setroka, zavona, entona misy poizina ary etona misy poizina, sns., Amin'ny alàlan'ny fitaovana sivana, manakana azy tsy hoentin'ny olona.
Amin'ny ankapobeny, ny sarontava dia tokony ho habe mety ary ny fomba fitafy dia tokony ho marina mba hahomby ny saron-tava. Ny sarontava eny an-tsena amin'ny ankapobeny dia mizara ho karazany roa, mahitsizoro ary miendrika kaopy. Ny sarontava mahitsizoro dia tsy maintsy manana firafitra taratasy telo farafaharatsiny mba hiarovana azy. Ny mpampiasa dia mila manery ny tariby amin'ny sarontava amin'ny tetezana amin'ny orona, ary avy eo dia manaparitaka ny saron-tava iray manontolo amin'ny tetezan'ny orona mba hampisehoana ny fahombiazany. Avelao ny zaza hisaron-tava fandidiana mahitsizoro satria tsy manana endrika miorina tsara izy, ary raha voafatotra tsara dia afaka mifanaraka amin'ny endrik'ilay zaza. Ny sarontava miendrika kapoaka dia tsy maintsy miantoka fa ny masika dia manana hakitroka ampy aorian'ny fikatsoany amin'ny tarehy, mba tsy hivoaka ny rivotra rehefa mifoka rivotra izy ireo mba hahomby. Rehefa manao sarontava miendrika kaopy dia sarony amin'ny tanana roa ilay sarontava ary manandrama mitsoka rivotra. Hamarino raha misy fivoahan'ny rivotra avy amin'ny sisin'ny sarontava. Raha tsy tery ilay sarontava dia tsy maintsy alaminao tsara ilay toerana ary anaovy azy.
Inona avy ireo vokatra vita amin'ny lamba tsy tenona?
Fitaovana azo ariana
Ny vokatra ara-pitsaboana tsy tenona dia ny lamba ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana vita amin'ny kofehy simika ao anatin'izany ny polyester, polyamide, PTFE, polypropylene, fibre carbon ary fibre vera. Ao anatin'izany ny saron-tava azo ariana, akanjo miaro, akanjo fandidiana, akanjo mitokana, akanjo laboratoara, satroka mpitsabo mpanampy, satroka fandidiana, satroka dokotera, kitapo fandidiana, kitapo fiterahana, kitapo vonjy taitra, paosy, fonosana, lambam-pandriana, fonony duvet, fonony kiraro ary fanary hafa azo ampiasaina fihinanana fanafody. Raha ampitahaina amin'ny lamba vita amin'ny rongony vita amin'ny landihazo madio, ny lamba tsy misy tenona ara-pahasalamana dia manana ny toetran'ny fanivanana avo lenta ho an'ny bakteria sy ny vovoka, ny tahan'ny aretina azo avy amin'ny fandidiana, ny famonoana otrikaina sy ny fanamorana ary mora mifangaro amin'ny fitaovana hafa. Ny vokatra ara-pitsaboana tsy tenona, toy ny fanary fanary fanary, dia tsy mora ampiasaina, azo antoka ary madio ara-pahasalamana, fa misoroka tsara koa ny aretina mikraoba sy ny tsimokaretina iatrogenika. Any Chine, ny fampiasam-bola amin'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny fahasalamana dia nahatratra mihoatra ny 100 miliara yuan, izay ny sandan'ny vokatra azo avy amin'ny vokatra sy fitaovam-pidiovana dia nahatratra 64 miliara yuan, ary mivoatra amin'ny lalana samihafa.
Kitapo fonosana vita amin'ny lafarina
Ny kitapo lafarinina vita amin'ny lamba tsy tenona dia maivana, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy hamandoana, miaina, miovaova, tsy mahazaka afo, tsy misy poizina, tsy mahasosotra ary azo haverina. Izy ireo dia vokatra eken'ny sehatra iraisam-pirenena sy sariaka tontolo iainana izay miaro ny ekolojia eto an-tany. Izy io dia ampiasaina amin'ny fonosana kely misy paty vary isan-karazany, toy ny: lafarinina varimbazaha, lafarinina katsaka, koba buckwheat. Vary, sns. Ireo karazana lamba vita amin'ny lamba tsy tenona ireo dia vita pirinty amin'ny rano sy ranomainty, loko tsara sy kanto, mazava, tsy misy poizina, tsy misy fofona ary tsy mikorontana, sariaka kokoa ary madio kokoa noho ny fanontana ranomainty, ary mahafeno tanteraka ny tontolo iainana fepetra fiarovana ny olona maoderina. Noho ny kalitao azo antoka, ny vidiny mirary ary ny androm-piainana maharitra. Ny tena miavaka dia ny 1 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg ary ny famaritana hafa momba ny kitapo mofomamy paty, kitapo fonosana, sns.
Kitapo miantsena lamaody
Kitapo tsy tenona dia vokatra maitso, henjana sy mateza, tsara tarehy, tsara fofonaina, azo ampiasaina indray, azo sasana, dokam-barotra azo soratana, marika, fampiasana maharitra, mety amin'ny orinasa, orinasa rehetra toy ny dokam-barotra, fanomezana. Mahazo kitapo tsy misy tenona tsara tarehy ny mpanjifa rehefa miantsena, ary ny mpivarotra mahazo doka tsy hita, ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa, ka manjary malaza be eo amin'ny tsena ireo lamba tsy tenona.
Ny vokatra dia vita amin'ny lamba tsy tenona. Izy io dia taranaka vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana fitaovana. Izy io dia miorina amin'ny hamandoana, miaina, miovaova, maivana, tsy mora may, mora simba, tsy misy poizina ary tsy mahasosotra, be loko, ambany ny vidiny ary azo averina. Ny fitaovana dia azo simba voajanahary aorian'ny 90 andro any ivelany, ary manana fiainana mandritry ny 5 taona ao amin'ny efitrano. Tsy misy poizina izy io, tsy misy fofona ary tsy misy akora sisa tavela rehefa may, ka tsy mandoto ny tontolo iainana ary ekena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho vokatra sariaka tontolo iainana izay miaro ny ekolojian'ny planeta.
Ny tombony amin'ny milina fanaovana sarontava
1. Ny fampiasana fantsom-pandrefesana ultrasonic dia manala ny filan'ny kofehy fanjaitra, mamonjy ny olan'ny fiovan'ny kofehy matetika, tsy misy kofehy tapaka amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy nentim-paharazana, ary manety ny lamba eo an-toerana sy manisy tombo-kase ny lamba. Ny zaitra koa dia manana andraikitra haingon-trano. Izy io dia manana firaiketam-po mahery, mety hahatratra ny vokadin'ny tantera-drano, ny embossing mazava, ny vokatr'ilay fanampiana telo-habe amboniny, ny hafainganam-pandeha haingana, ny vokatra tsara ary ny hatsarana avo lenta; antoka kalitao.
Faharoa, ny fampiasana fanodinana kodiarana ultrasonikaly sy vy manokana, ny sisin'ny tombo-kase tsy vaky, tsy handratra ny sisin'ny lamba, ary tsy misy burr, curling tranga.
3. Tsy ilaina ny preheating mandritra ny famokarana, ary azo atao ny miasa mitohy.
Fahefatra, ny fandidiana dia tsotra, tsy dia samy hafa amin'ny fomba fiasan'ny milina fanjairana mahazatra, afaka miasa ireo mpiasa manjaitra mahazatra.
5. Vidiny ambany, 5-6 heny haingana noho ny milina nentin-drazana, fahombiazana avo lenta.
Rahoviana ianao no mila manova ny sarontava？
1. Ny saron-tava dia voaloton'ny zavatra vahiny toy ny pentina rà na ny rano mitete
2. Mahatsapa ny mpampiasa fa mihalehibe ny fanoherana ny fifohana rivotra
3. Saron-tava simba
4. vovoka sivana manaporofo vovoka, rehefa manakaiky ny tavan'ilay mpampiasa ny sarontava, rehefa mahatohitra fanoherana miaina be ny mpampiasa, midika izany fa feno vovoka ny vovoka sivana ary tokony soloina
5. Rehefa mifanakaiky akaiky amin'ny varavaran'ny mpampiasa ilay boaty sivana manohitra ny viriosy sy ny sarontava, rehefa maimbo ny poizina ilay mpampiasa dia tokony hosoloina sarontava vaovao izy. Ny rà mandriaka avy amin'ny mucosa orona dia matanjaka be.
Tombony amin'ny saron-tava mivalona
Masinina misaron-tava dia milina miasa tanteraka amin'ny famokarana vatan-tava misaron-tava. Amin'ny fampiasana ny haitao ultrasonika, ny masinina misaron-tava dia mifamatotra 3 ka hatramin'ny 5 sosona lamba tsy vita amin'ny PP, gazy karbonika sy fitaovana sivana ary manapaka ny vatan'ny sarontava, izay azo zahana 3M9001, 9002 ary vatana sarontava hafa.
Ny masinina misaron-tava dia samy hafa arakaraka ny fitaovana nampiasana azy tany am-boalohany, ary ny sarontava novokarina dia mety hahatratra ny famaritana isan-karazany toy ny FFP1, FFP2, N95, sns. , lamba sivana saron-tava Ny sosona dia misy vokany tsara amin'ny sivana, mifanaraka tanteraka amin'ny endrik'ireo endrika Aziatika, ary azo ampiharina amin'ny asa fanamboarana, fitrandrahana harena an-tany ary asa hafa mandoto indrindra.
Masontsivana ara-teknikan'ny masinina misaron-tava
1. Fanaraha-maso mavitrika PLC, fanisana mavitrika amin'ny masinina misaron-tava.
2. Fitaovana fanitsiana tsotra ho an'ny milina sarontava mivalona, ​​mora ny manova fitaovana.
3. Ny lasitra dia mandray ny fomba fitrandrahana sy fanoloana. Ny masinina misaron-tava dia afaka manolo haingana ny lasitra ary mamokatra karazana sarontava.
4. Ny milina sarontava mivalona dia vita amin'ny firaka aliminioma, izay tsara tarehy, matanjaka ary tsy harafesina.
5. Fitaovana famahanana sy fandraisana fitaovana lehibe.
6. Ny milina sarontava mivalona dia manana marin-toerana avo sy tahan'ny tsy fahombiazana ambany.
Torohevitra momba ny fanaovana sarontava N95
Mampahatsiahy anao ny masinina masera N95: aza mijanona rehefa nesorina ilay sarontava N95. Aforeto ny saron-tava N95 avy any ivelany ka hatrany anatiny. Tandremo sao avela hikasika ny ao anaty saron-tava ny tananao rehefa aforeto. Fonosy tsara ny hozatrao na ny mosara hampiasaina amin'ny manaraka. Ny saron-tava N95 dia tokony diovina sy diovina isan'andro. Na ny saron-tava na ny saron-tava dia mety ho voan'ny otrikaretina amin'ny fanafanana. Aorian'ny fisasana amin'ny rano madio dia ahantona amin'ny masoandro.
Momba ny saron-tava N95
Ny sarontava N95 dia teraka nandritra ny fotoana manokana "SARS". Nandalo ny fanamarinana NIOSH tany Etazonia sy ny fanamarinana FFP2 tany Eropa izy ireo. Izy ireo dia manana fiarovana avo lenta amin'ny aretina mamindra taovam-pisefoana. Na izany aza, ny saron-tava N95 dia matevina kokoa, tsy manana fofonaina miaina tsara, ary manana fiononana mitafy somary ambany. Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia tsy ampiasaina raha tsy ny dokotera no mamantatra sy mitsabo areti-mifindra be. Tsy ilaina ny fiarovana ankapobeny ho an'ny olona salama. Ity karazana sarontava ity dia iray amin'ireo sarontava miady amin'ny zana-tsipìka 9 voamarin'ny NIOSH (Ivon-toerana Nasionalin'ny fiarovana sy ny fahasalamana amin'ny asa). "N" dia midika hoe tsy mety amin'ny poti-menaka (setroka misy menaka ateraky ny fandrahoana sakafo dia singa bitika misy menaka, ary ny vongan-drano vokarin'ny olona miresaka na mikohaka dia tsy misy menaka); Ny "95" dia manondro ny fanivanana ambanin'ny fisedrana notondroin'ny NIOSH Ny fahombiazany dia mahatratra 95%. N95 dia tsy anaran'ny vokatra manokana. Raha mbola mifanaraka amin'ny fenitra N95 izy io, ary ny vokatra izay mandalo ny tsikera NIOSH dia azo antsoina hoe saron-tava "N95"
Momba ny sarontava kapoaka
Ny endrika kaopy dia manondro ny endrik'ilay sarontava. Ny saron-tava miendrika kaopy dia mampiasa polypropylene izay tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy mahazaka, tsy mahasosotra, tsy misy poizina sy poizina manimba ary fibre fitaratra toy ny akora fototra, famolavolana olona, ​​fisafidianana fitaovana avo lenta, fifantenana fitaovana avo lenta, fanaterana kalitao avo lenta, miaraka amin'ny fahatsapana malefaka sy feno Filtration mahomby, fanapoizinana manohitra ny ambany, fanalefahana aina, fofonaina ary ahazoana aina, madio ara-panahy, mety, azo antoka ary tsara tarehy.